Chelsea ayaa isku diyaarineysa dalabkii ugu danbeeyay oo ah qaado am aka tag, iyagoo 7.5 milyan ginni ku dalban doona Victor Moses, lakiin kooxda Wigan ayaa weli ku dooneysa lacag intaas ka badan 21 jirkaan. (Eurosport)
U dhaqaaqistii ciyaaryahanka Fulham ee Clint Dempsey ee kooxda Liverpool ayaa aad u soo dhawaatay ka dib markii ciyaaryahanka khadka dhexe ee dalka Mareykanka uu ka haray socdaalka ay Fulham ku tageyso Switzerland si uu u qasbo heshiiska Anfield uu ku tagayo. (The Sun)
Real Madrid ayaa weli ciyaar qatar ah oo dhanka suuqa ah ciyaareysa oo ku aadan saxiixa Luka Modric, ka dib markii ay sheegeen inaysan bixin doonin lacagta 40ka milyan ginni ee ay dooneyso kooxda Tottenham. (Daily Express)
Tababare Roberto Mancini ayaa 13 milyan ginni ku dalbaday daafaca kooxda Liverpool Daniel Agger, lakiin Liverpool ayaa islamarkiiba hore ka soo diiday. (Daily Star)
Juventus ayaa ku soo laabaneysa tartanka Robin van Persie, waxaana ay diyaar u yihiin heshiis rikoor ah, iyadoo qorsheynaya inay kula soo wareegaan 20 milyan ginni, halka mushahar ahaan ay u siin doonaan ciyaaryahanka reer Holland 50 milyan ginni wadar ahaan qandaraaskiisa. (Daily Mirror)
Weeraryahanka Liverpool Andy Carroll ayaa iska diidi doona heshiis amaah ah oo uu ugu dhaqaaqo West Ham, inkastoo labada kooxood ay ka heshiiyeen heshiis amaah ah oo ku kacaya 2 milyan ginni, islamarkaana West Ham ay ciyaaryahanka ku iibsan karto 17 milyan ginni si joogta ah. (Guardian)
Tababare Martin O’Neill ayaa ku daray kooxda Sunderland liiska kooxaha doonaya 23 jirkaan weerarka uga ciyaara Liverpool iyo England Andy Carroll. (The Sun)
Dhinaca kale Carroll kooxdiisii hore Newcastle United ayaa qorsheyneysa dalab cusub inay u soo bandhigto Liverpool, iyadoo West Ham ay ku dhowdahay inay soo gabagabeyso heshiiska. (Daily Mail)
Kooxda Newcastle ayaa halis ugu jirta inay weyso daafaca kooxda Lille Mathieu Debuchy, ka dib markii Inter Milan ay kula soo biirtay doonista ciyaaryahanka reer France. (Daily Mirror)
Tababaraha kooxda Barcelona Tito Vilanova ayaa ku dhow inuu Andre Villas-Boas ka dul qaado ciyaaryahanka khadka dhexe ee FC Porto Joao Moutinho. (Daily Mirror)
Tababaraha kooxda Liverpool Brendan Rodgers ayaa doonayaa goolhayaha kooxda Wolves Dorus de Vries, kaasoo ay iskula soo shaqeeyeen kooxdiisii hore ee Swansea. (The Sun)
Liverpool ayaa sidoo kale dooneysa goolhayaha kooxda Birmingham Jack Butland, ka dib markii indho indheeyayaal ka socda kooxda ay la dhaceen ciyaaryahanka maalintii axada ka dib qaab ciyaareedkiisii Team GB. (Metro)
Qorshihii uu ciyaaryahan Dimitar Berbatov ugu biiri lahaa kooxda Galatasaray ayaa burburay, ka dib markii kooxda Turkiga ay ka baxday doonista weeraryahanka Manchester United. (Daily Mail)
Lakiin kooxd QPR ayaa isku diyaarineysa inay dalbato ciyaaryahan Berbatov. (Times)
Tottenham ayaa ka fiirsaneysa inay 7.5 milyan ginni ku dalbato ciyaaryahanka da’da yar ee kooxda Liverpool Raheem Sterling. 17 jirkaan ayaa waxaa amaah ku dooneysa kooxdiisii hore QPR lakiin Spurs ayaa rabta heshiis joogta ah. (Daily Mail)
Ciyaaryahanka reer Brazil Neymar ayaa ku wargeliyay kooxdiisa Santos inuu doonayo inuu u ciyaaro Barcelona, ka dib ciyaaraha Olimbikada ee haatan ka socda London, waxaana qandaraaska Neymar ee Santos uu ku egyahay xagaaga 2014. (Sport)
Kooxda Real Madrid ayaan dooneynin inay heshiis amaah ah ku fasaxdo kubadsameeyaha reer Brazil Ricardo Kaka, halka AC Milan ay u soo bandhigtay inay amaah ku doonayaan Kaka waa hadii mushaharkiisa la dhimo, lakiin Los Blancos ayaa ku wargelisay Rossoneri, inaysan aqbali doonin wax aan ka aheyn iibsasho toos ah. (Marca)
Ricardo Kaka ayaa sii joogi doona Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda, ilaa iyo koox ay miiska soo saarto 25 ilaa 30 milyan euro ka hor 31ka bisha August inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. (AS)
Kooxda Barcelona ayaa u aragta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Alex Song bedelka ciyaaryahan Seydou Kieta oo u dhaqaaqay China, waxaana ay ka fiirsanayaan inay ku dalbadaan 15 milyan euro. (Sport)
Kooxda Barcelona ayaa sidoo kale ku dhow inay la soo wareegto daafaca kooxda Liverpool Daniel Agger, inkastoo ay tartan kala kulmayaan kooxo kale oo doonaya ciyaaryahanka reer Denmark. (Sport)
Kooxda Inter Milan ayaa go’aansatay inay daafaca reer Brazil Maicon ku soo darto kooxdeeda ka qeybgaleysa Europa League, inkastoo ciyaaryahanka uu codsaday inaan lagu soo darin liiskaas, madaama uu rajo ka qabo inuu Champions League u ciyaaro kooxda Real Madrid hadii ay la wareegaan. (Marca)
Kooxda Sevilla ayaa si rasmi ah u la soo wareegtay ciyaaryahanka reer Brazil ee kooxda Palmaries Cicinho, kaasoo u saxiixay heshiis afar sanno ah. (Marca)
Kooxaha Benfica iyo Atletico Madrid ayaa ka heshiiyay saxiixa ciyaaryahanka kooxda Atletico Salvio, heshiis qiimahiisa lagu sheegay 11 milyan euro. (AS)
Kooxda Juventus ayaan weli ku dhaweyn saxiixa weeraryahanka Fiorentina Stevan Jovetic, waxaana Juve ay si aad ah u dooneysaa inay marka hore iska iibso Ziegler iyo Melo si ay u kordhiyaan dalabkooda ku aadan ciyaaryahanka kooxda Viola. (Goal)
Daafaca kooxda Paris Saint-Germain iyo dalka Brazil Thaigo Silva ayaa sheegay inuu iska sii joogi lahaa kooxda AC Milan, balse Rossoneri ay fiirsatay kaliya howsheeda ganacsiga iyo lacagta ka soo galeysa heshiiskiisa uu ugu dhaqaaqay kooxda Faransiiska. (Gazzetta dello Sport)
Daafaca bidix ee kooxda Palermo iyo xulka Talyaaniga Federico Balzaretti ayaa dalbaday in la siiyo maalmo uu kaga fekero mustaqbalkiisa, lakiin waxa uu qarka u saran yahay inuu u dhaqaaqo kooxda ka dhisan caasimada Talyaaniga ee AS Roma. (Gazzetta dello Sport)
Ciyaaryahanka kooxda Liverpool ee khadka dhexe Alberto Aquilani ayaa sida ay u muuqato waxa uu ku sii jeedaa kooxda Fiorentina, inkastoo wakiilkiisa uu beeniyay warkaan maalmihii u danbeeyay. (Gazzetta dello Sport)
Kooxda Inter Milan ayaa isku dayaysa inay dalab u dirsato kooxda FC Porto iyagoo doonaya ciyaaryahankooda khadka dhexe Fernando, lakiin Porto ayaa ku dooneysa ciyaaryahanka ilaa 17 milyan euro, lacagtaasoo qaali ay u aragto kooxda Nerazzurri. (Corriere dello Sport)
Kooxda Juventus ayaa ugu danbeyn gacanta ku dhigtay weeraryahanka 19 jirka kooxda Atlanta Bocchetti, waxaana ay qorsheynayaan marka ay dhameystiraan saxiixiisa inay amaah ku fasaxaan, iyadoo Bologna ay ka mid tahay kooxaha amaahda ku doonaya. (Tuttosport)
Wakiilka ciyaaryahan Pablo Armero ayaa xaqiijiyay in Juventus ay isku dayayso inay heshiis kala gaarto Udinese ciyaaryahanka uu wakiilka u yahay. (Football Italia)
Kooxda Inter Milan ayaa si rasmi ah uga iibisay weeraryahanka da’da yare e dalka Holland Luc Castaignos kooxda FC Twente. (Football Italia)
Ciyaaryahan Mauro Zarate ayaa doonaya inuu sii joogo kooxda Lazio, ka dib markii uu ku guuldareystay inuu si joogta ah ugu biiro kooxda Inter Milan oo uu xilli ciyaareedkii hore amaah kula joogay. (Football Italia)
9/6/2014 06:45:16 am